Akụkọ - Ihe Mere Mgbaama Ọpụpụ Ji Dị Mkpa
Ihe ịrịba ama n'èzí abụghị naanị na-emekarị, ha bụ ọkara iji kwalite azụmahịa gị. Y’oburu na ibu onye nwe obere ulo ahia, nke ahu bu ahia gi ma o di oke nkpa ka ijide ndi ahia gi. Dịka anyị bi n'ọgbọ nke oge a, ụbọchị ejiri aka akara aka agafeela. Ndị mmadụ ka na-eji ha eme ihe mana ha anaghị adọrọ mmasị ọzọ. N'agbanyeghị nke ahụ, na-eche na ị kwesịrị ịzụta akara ngosi n'èzí? Anyị ga-enye 5 ihe kpatara ị ga - eji tinye ego gị na ọkụ na - eduga n'èzí.
Mpempe akwụkwọ ozi, nke a makwaara dị ka leta dị elu, bụ ihe na-ekpebi etu onye nwere oke anya nwere ike ịgụ ozi gị. Inweta mmejọ a ga - eduga na ide edemede gị pere mpe nke gụrụ agụ ma ọ bụ buru oke ibu. Nke a na - emetụta akara nke ihe ịrịba ama gị nke ukwuu yana ọ bara uru ịgbasa ozi.
Duden na-asọ site n'akụkụ ha ma nye ya regelialia dị mkpa. Ọ bụ obodo paradisematic, nke akụkụ ahịrịokwu a roara n'ọkụ fefere n'ọnụ gị.
Ihe ọzọ mere eji eji ihe ịrịba ama n’èzí eme ihe bụ na ha na-enwu gbaa ma na-adọta ọtụtụ mmadụ ọbụlagodi n’oge nwayọ nwayọ. Ọ bụrụ na azụmahịa gị dị na mpụga, mgbe ahụ nhọrọ a zuru oke maka azụmahịa gị. Ọ bụghị naanị na ihe ịrịba ama ndị a na-enwu gbaa mana ha doro anya ịhụ. Nke a pụtara na ị na-eme ka ọ dịrị ndị ahịa gị mfe ịhụ ihe ị na-enye ma ha ga-abịakwute gị.
Post oge: Ọgọstụ-09-2020